CITE: valo volana tsy voaloa ny karaman’ny mpiasa | NewsMada
CITE: valo volana tsy voaloa ny karaman’ny mpiasa
Par Taratra sur 14/11/2018
Mitaky ny zony feno sy ara-dalàna ireo mpiasan’ny CITE*, izay efa valo volana izao no tsy nandray karama. Natsangana avy amin’ny fiaraha-miasa Frantsay izy io, nanomboka ny taona 1967, 51 taona izao. Navadika ho ONG malagasy, nanomboka ny taona 1995, nanokatra masoivoho hafa tany amin’ny faritany na niaraka tamin’ny Antenimieran’ny varotra. Mbola nitantana azy io ny Frantsay hatramin’ny 2005. Nanomboka 2010, Malagasy tanteraka no nisahana azy ka gaboraraka ny fitantanana, araka ny fanamarihan’ny solontenan’ny mpiasa, mitaky ny karama valo volana tsy voaloa.
Manao fitokonana ireo mpiasa ireo ary mitohy izany hatramin’izao. Etsy andaniny, tsy avela miditra ao amin’ny toeram-piasana izy ireo no efa nendahana ny anarana “CITE” eo amin’ilay trano eny Ambohimiandra. “Mafy ny mahazo anay, misy aminay ireto efa voaroaka amin’ny trano nipetrahana, satria tsy voaloa ny hofan-trano, sahirana izahay amin’ny fampianarana ny zanakay. Tsy mety mandray anay mpiasa ny tompon’andraikitra hatramin’izao”, hoy ny solontenan’ny mpiasa, Randriambololona Rolland.
29 novambra ny “arbitrage”
Ny volana avrily izy ireo no nanomboka nitatitra izao olana izao, ary efa nitondra izany any amin’ny sampana mpanara-maso ny asa, Fantatra ary fa amin’ny 29 novambra ho avy izao ny “arbitrage” eny amin’ny fitsarana. “Manantena ny mpiasa rehetra ary mahatoky ny fitsarana izahay”, hoy io solontenan’ny mpiasa io. Manohana azy ireo rahateo ny fiombonan’ny sendika, SSM, nahitana ny sekretra jeneraliny, Rakotomanga Barison
Noho izay fitantanana gaboraraka izay, niavosa ny trosan’ny CITE, anisan’izany, tsy voaloa ny hofan-trano teo Ambatonakanga, toerana nahafantaran’ny maro azy. Na amin’ny trano misy azy amin’izao fotoana eny Ambohimiandra, mbola tsy voaloa koa ny hofan-trano sy trosa maro hafa. Tsy voaloa toy izany koa ny Cnaps, nanomboka ny taona 2013. Ny Malagasy ihany no mampahantra ny Malagasy mpiray tanindrazana aminy, noho ny fitiavan-tena sy ny fitantanana tsy manjary.